Qalabka casriga ah ee durba xaaqay xilli ciyaareedkan | Bezzia
Aaladaha isbeddelka ee horeba u guulaysanayey
Susana godoy | 10/09/2021 10:00 | Dhameystirka
Waxaa jira plugins aasaasi ah ka dibna qalabka isbeddelka ee aan arki doonno xilli kasta. Laakiin xaaladdan waxaan ku haray dayrta iyo jiilaalka 2021-2022 maxaa yeelay waxaan ku dhow nahay halkaas. Marka, waa waqtigii la ogaan lahaa wax kasta oo qaadan doona iyo wax badan.
Mararka qaar waxaan jecelnahay inaan raacno qaabkeena gaarka ah laakiin dhib ma leh in la isku daro oo leh faahfaahin qaar ka mid ah kuwa dejinaya isbeddellada. Sababtoo ah isku darka soo dhaweynta ayaa mar walba lagu gaari doonaa muuqaalkayaga ugu fiican. Haddii aad rabto inaad ogaato waxaan ka hadlayno, markaa ha seegin waxa soo socda.
1 Dhegaha Maxi wali waa isbeddel weyn
2 Nabarro qoorta ilaa madaxa
3 Suumanka ayaa ka mid ah qalabka casriga ah
4 Bacaha leh dhammaadka tidcan
Dhegaha Maxi wali waa isbeddel weyn
Dhegaha waa mid ka mid ah aasaaska weyn ee muuqaal kasta oo is-ixtiraam leh waana ognahay. Sidaa darteed, waxay had iyo jeer diyaar u yihiin inay nooga tagaan qaabab kala duwan hadba baahidayada. Sannadkan si aad u cad ayaad u yeelan doontaa, sababtoo ah wax aan la ogaan karin ayaga, laakiin waxaan u oggolaan karnaa in nafaheena lagu qaado qaadka weyn iyada oo aan wax khatar ah la gelin. Sababtoo ah hilqadaha maxi waxay noqon doonaan xiddigaha waaweyn ee xilliga dayrta iyo xilliga jiilaalka. Kii weynaa ayaa ka sii wanaagsan. Dabcan, haddii aad la yaabban tahay nooca moodooyinka aan ku dari doonno cabbirkaas, waxaan si cad u leenahay. Sababtoo ah kuwa ku dhammaystay dhawr burush oo dhalaalaya ayaa noqon doona kuwa ugu muuqda xilli ciyaareedkan. Miyaad hore u haysay moodeel? Tusaale ahaan Zara, waxaad ka heli kartaa midabbo iyo qaabab kala duwan.
Nabarro qoorta ilaa madaxa
Waxay u muuqataa inaan dib u jaleecno mar labaad iyo tii xirashada indho -shareerka waxay ina xusuusineysaa 60kii halkaas oo kuwii caanka ahaa lagu qaaday kaabayaal sidan oo kale ah. Hagaag hadda waxaad dareemi kartaa sidii xiddig Hollywood ah oo ay ugu mahadcelinayaan aaladaha casriga ah. Sababtoo ah waxay noqon doonaan kuwa ku weheliya socdaalladaada maalinlaha ah. Waxaad kala dooran kartaa qaababka iyo midabada kala duwan ee ay shirkaduhu noo soo jeediyaan, sababtoo ah waxaan taas u daynaa rabitaankaaga. Laakiin markan ma arki doonno oo kaliya sida marada loo geliyo madax -madaxeedka laakiin waxay dabooli doontaa madaxa oo dhan si qoorta loogu xidho.
Suumanka ayaa ka mid ah qalabka casriga ah
Dabcan, haddii aan xusno kaliya suumanka, ma aha wax naga yaabiya maxaa yeelay waxaan horeba u ognahay inay mar walba nala socdaan muuqaalka ugu fiican. Laakiin waa in la xusaa in kiiskan kuwa cabbirkoodu weyn yahay ay iyaguna xoog leeyihiin. Haa, waxay u muuqataa in inta u dhaxaysa jawharadaha iyo suumanka, sumcadda muuqaalka goor dhow la dhammaystiri doono. Marka la dhammeeyo XXL waxay mas'uul ka noqon doonaan inay siiyaan iftiin badan qaabkaaga, si aad ugu buuxiso qaabab iyo midabyo aad doorato. Marka, hubaal waad heli doontaa midka aad raadineyso, laakiin xusuusnow waligaa ha ilaawin. Qaabka suunka iyo silsiladaha labadaba waa qaar ka mid ah fikradaha waaweyn ee adiga ku sugaya.
Bacaha leh dhammaadka tidcan
Waa run in boorsooyinku aanay sidoo kale seegi karin ballantii dayrta. Sababtoo ah markaan ka hadlayno aaladaha casriga ah, ma doonaysid inaad seegto bandhigga. Laakiin, in kasta oo aan siyaabo kala duwan u xidhan karno oo midabyo kala duwan leh, haddana waxaa jira hal faahfaahin oo ka sarraysa kuwa kale oo dhan. Waxay ku saabsan tahay dhammaadkeeda oo waa in kuwa leh tidcan ay noqon doonaan kuwa la wareegi doona xilli ciyaareedkan cusub. Waxay u muuqataa inaanan doonayn inaan xagaaga ka tagno dhammaadkan ayaa sidoo kale la arkay xilligii xagaaga. Markaa wali way joogaan oo way ka xoog badan yihiin sidii hore. Sidoo kale dooro qaababka ballaadhan iyo kuwa bacda leh maxaa yeelay waxay dhammaystiri doonaan dayrtaada cusub si aan hore loo arag.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » Dhameystirka » Aaladaha isbeddelka ee horeba u guulaysanayey
Diyaargarowga Cuntada, faa'iidooyinka qorsheynta menu toddobaadle ah
4 isbeddellada qurxinta ee dayrta 2021